शिद्धार्थ शुक्लाको निधनको कारण यस्तो रहेछ, समीर सोनीले खोले रहस्य सिद्धार्थ किन निकै तनावमा थिए ? – Kavrepati
Home / समाचार / शिद्धार्थ शुक्लाको निधनको कारण यस्तो रहेछ, समीर सोनीले खोले रहस्य सिद्धार्थ किन निकै तनावमा थिए ?
शिद्धार्थ शुक्लाको निधनको कारण यस्तो रहेछ, समीर सोनीले खोले रहस्य सिद्धार्थ किन निकै तनावमा थिए ?
admin September 3, 2021	समाचार Leaveacomment 187 Views
एजेन्सी । बिग बोस १४ का बिजेता र टिभी अभिनेता सिद्धार्थ शुक्लाले संसारलाई बिदाइ गरेका छन्। सिद्धार्थको हृदयघातका कारण मृत्यु भएको बताइएको छ। मुम्बईको कूपर अस्पतालले सिद्धार्थको मृत्युको खबरको पुष्टि गरेको छ। सिद्धार्थ शुक्ला टिभी उद्योगमा एक ठूलो नाम थियो। उनको मृत्युको कारणले उद्योग र प्रशंसकहरुमा शोकको लहर छाएको छ।
अभिनेता समीर सोनी सिद्धार्थ शुक्लाको बारेमा भारतीय मिडिया आज तक संग कुरा गर्दै निधनको कारण बारे कुरा गरेका छन् । समीरले भने कि सिद्धार्थ आफ्नो त ना व र फिटनेस को बारे मा धेरै चिन्तित थिए। समीर सोनी युवाहरुमा त ना व को समस्याको बारेमा कुरा गरे । यस्ता युवाहरुमा कि हृदयघात हुने वा देह त्याग समेत गर्न सक्ने बताउँछन् ।
समीर सोनीले यो कुरा भने
समीरले भने, ‘मानिसहरुमा राम्रो र फिट देखिनको लागी दबाब हुन्छ। बाहिर बाट राम्रो देखिन्छ तर वास्तवमा यस्तो हुँदैन । तपाइँ मानसिक रूपमा फिट हुनु पर्छ। तपाइँ सुत्नु पर्छ ताकि तपाइँको अनुहार राम्रो देखिन्छ र तपाइँ काम पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ सबैलाई राम्रो देखिने दबाब छ, विशेष गरी युवा कलाकारहरु। म युवा कलाकार र बच्चाहरुलाई उद्योगको एक हिस्सा मान्दिन। एक सिक्स प्याक र शरीर फिट देखाउँदै मानिसहरुमा एक नराम्रो प्रभाव छ।
सिद्धार्थ दबाबमा थिए ?
भनिन्छ कि सिद्धार्थ शुक्ला हरेक दुई महिनामा आफ्नो कसरत र शरीर परिवर्तन गर्थे। उनी आफ्नो शरीरलाई अधिक र अधिक फिट देखाउन को लागी जबरजस्त कसरत गर्थे, जसले उनको स्वास्थ्यमा नराम्रो प्रभाव पारेको थियो। चीजहरु उनको आहार र त ना व को बारे मा भनिएको छ। तर, राहुल महाजनले भनेका छन् कि सिद्धार्थ सुपरम्यान जस्तै फिट थिए।
Previous इटहरीकि २० वर्षीय दुर्गाले यस्तो ड रलाग्दो चिठी लेखेर बेपत्ता भएकी छिन् ,पढ्नुस् त्यो कहालीलाग्दो चिठी (भिडियो हेर्नुस्)
Next राती ३ वजे उठेर आमालाई यस्तो भनेका रहेछन् सिद्धार्थ शुक्लाले